Izindaba - Inoveli engazelelwe yeCoronavirus iphazamise ukuhweba komhlaba wonke.
Inoveli engazelelwe yeCoronavirus yaphazamisa ukuhweba komhlaba wonke. Amakhasimende amaningi akhathazekile ngokuthi awanaye unjiniyela ongafaka noma ukulungisa iphutha emishinini ayithenge eChina. Yebo, kuyiqiniso ukuthi abahlinzeki abaningi banenkinga, kodwa hhayi enkampanini yethu, ngoba ngaphezu konjiniyela baseChina, onjiniyela abanolwazi kakhulu baseNdiya, nabanjiniyela baseJordanian. Vele ngoNovemba, unjiniyela wethu waseNdiya waya e-Yemen ukufaka umugqa wokukhiqiza we-EPS Shape Molding Machine. Iklayenti lithenge yonke i-EPS SHAPE MOLDING MACHINE LINE, kufaka phakathi i-EPS BATCH PREEXPANDER, i-SILOS, i-EPS SHAPE MOLDING MACHINE, i-EPS MOLD NEZINYE IZINTO ZOKUSEBENZA EZIDINGEKAYO. Konke kuhambe kahle ngesikhathi sokufakwa, kusiza ikhasimende ukuthi liqale ukukhiqiza ngesikhathi.
Ifektri yethu yamakhasimende yaseYemen ikhiqiza kakhulu izitini ze-EPS zokufaka, okuyizinto eziyisisekelo sokufaka ungqimba lwezitini ze-EPS ezifakiwe, ukhonkolo-izitini zikakhonkolo. Lo ngumkhiqizo odume kakhulu emazweni aseMpumalanga Ephakathi. Iklayenti laseYemen lisinikeze i-oda ngaphandle kokuvakashela eChina. Ngokuxhumana nge-intanethi, sichaze imishini yethu ye-EPS imininingwane nezinzuzo, samkhombisa amavidiyo wemishini yethu ye-EPS esebenza, samchazela yonke imibuzo yakhe yezobuchwepheshe ngobungcweti, senza ukuhlaziywa kwezindleko zokukhiqiza ukuze bakwazi ukwenza umbiko wokufundeka okungenzeka kalula. Ngemuva kwezinyanga ezimbili zokuxhumana, banquma ukubambisana nathi. Kepha ngoba bekungokokuqala ukubambisana futhi asikaze sihlangane, ikhasimende ligunyaze inkampani yokuhlola evela eceleni ukuthi ihlole yonke imishini ngemuva kokukhiqizwa, futhi ihlole iziqukathi ezilayishayo esizeni. Ukuhlolwa, kusukela ekupakisheni imikhiqizo kuye ekulungisweni kwemishini esitsheni, kuphumelele ukuhlolwa kwabo ngokushelela. Vele, uhlobo olunjalo lokuhlolwa komuntu wesithathu akusikho okokuqala kithi. Samukela noma yiliphi ikhasimende ukuthi lithole izikhungo ezivela eceleni ukuze zihlolwe.
Njengomhlinzeki womshini we-EPS oneminyaka engaphezu kwengu-15 yokuhlangenwe nakho embonini ye-EPS, ngokususelwa kumqondo wekhwalithi kuqala nekhasimende kuqala, sihlala siqala ngombono wekhasimende futhi sixazulule izinkinga kumakhasimende. Vumela ukusebenzisana kwethu kunqobe! Samukela abangani abanecebo lokuvula amafektri e-EPS noma ukuvuselela imishini ye-EPS.
Uma udinga umshini we-EPS, sicela uxhumane nathi, ngiyabonga!
Isikhathi Iposi: Jan-03-2021